PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - Ikhala ngesihluku sabaphathi inyunyana
Ikhala ngesihluku sabaphathi inyunyana
IKHALA ngesihluku samaphoyisa inyunyana yabasebenzi bamafemu ezicathulo aseJacobs emuva kokudutshulwa kwabahlanu ngesikhathi bebhikisha ngaphandle kwefemu yabo i-Eva Industries.
Izolo iSouthern African Clothing & Textile Workers’ Union (SACTWU) itshele Isolezwe ukuthi abasebenzi bayo basukeliwe ngamaphoyisa abadubula yize isiteleka sabo sisemthethweni.
UMnuz Vilina Membinkosi ongumgqugquzeli kazwelonke embonini yendwangu ephinde imele abasebenza embonini yesikhumba nezicathulo, uthe abasebenzi babo bafuna ukunyuselwa amaholo ngo-9.5% kodwa umqashi ubabekela u-6.25% etafuleni.
“Sikhathazekile ngabasebenzi bethu abahlanu abadutshulwe bebhikishela amaholo. Isiteleka sisemthethweni, asazi ukuthi kungani amaphoyisa ebadubulile. Ababili basesimeni esibucayi esibhedlela, abathathu bayalulama emakhaya. Abakufunayo u-9.5% nokuthi kuthuthukiswe izimo abasebenza ngaphansi kwazo,” kusho uMembinkosi.
Abasebenzi akade bebhikisha basebenza e-Eva Industries naseHopewell Industries zombili lezi zinkampani zikhiqiza izicathulo neminye imikhiqizo yesikhumba.
UMembinkosi uthe abasebenzi badinga ukunyuselwa amaholo ngenxa yokunyuka kwezindleko zokuphila abale kuzo intela ekhokha uma uthenge impahla iValue Added Tax, ukunyuka kukaphethroli okunyusa nokudla nokunyuka kwemali yokugibela neyerenti.
Uthe bakulungele ukuxoxisana nomqashi futhi isiteleka sabo sizoqhubeka kuze kube izimfuno zabo ziyalalelwa. Abasebenzi, oNksz Gugu Qwabe noNksz Sharon Bhengu, baveze ukuthi isimo sokusebenza naso asisihle kahle njengoba bengavunyelwa nokuthi bathathe ikhefu ukuthi bangcwabe noma banakekele abayeni babo uma begula.
“Uma ulovile kufanele usebenze amahora angu-42 engeziwe ngesonto ukuze ukhokhele ukuthi ubulovile. Baphinde basinqabele ukuthi siyongcwaba nokuthi sinakekele abayeni bethu. Kayikho i-family responsibility leave. Bafuna nokusiphuca imihlomulo eyenza sihole kangcono okusho ukuthi sizogcina sesigoduka noR600,” kusho uNksz Qwabe.
ULt Colonel Thulani Zwane wamaphoyisa KwaZulu-Natal uthe likhona icala elivulwe ngabasebenzi esiteshini samaphoyisa iWentworth.